Israa'el manneen jireenyaa 'seeraan alaa' Paalastayin jala jiran diigde - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Gamoowwan diigaman to'annoo warra Paalastaayin harka jiru
Israa'el manneen jireenyaa warra Paalastaayin seeraan ala ijaaraman jette diiguu eegalte.
Gamoowwan kunneen Weest Baank keessatti seeraan ala dallaa Israa'eliifi Paalastaayin adda qoodutti maxxanfamee ijaarame jettee diigde.
Buldoozaroonni loltootaafi poolisootaan dabaalamuun gamoowwan namootni 17 ta'an keessa akka jiraatan himame kana diiganiiru.
Jiraattonni garuu mana kana akka ijaarratan aanga'oota Paalastaayin irraa hayyama argannee turre jedhu.
Xiyyaarri Raashiyaa rukutamuun namootni 15 du'an
Israa'el garuu aanga'oonni Paalastaayin saamicha lafaatiif gamoowwan kunneen akka ijaaraman hayyamani jedhu.
Manni murtii Olaanaa Israa'elis ijaarsi manneen kanaa seeraan ala jechuun murteessee jira.
Manneen kana diiguun keessattuu kan dubbii kaasisanidha. Sababiin isaas qe'een ganda Wadi Hummus qarqara naannoo Sur Baher jiru - bulchiinsa daangaa Palastaayiin keessa kan qaama Weest Baank ta'ee garuu dallaa adda baasu ijaarameen garuu Israa'el keessatti argama.
Dallaan sun Weest Baankii keessaafi naannoo isheetti kan ijaarame yommuu ta'u kun kan ta'e bara mormii warra Palastaayin Israa'el irratti kaasan (intifada) kan marsaa lamaffaa yeroo jalqabuuf jedhu ture. Mormiin kun kan jalqabame ammoo bara 2000 ture.
Baqattoota Israa'el keessatti ari'amuun ykn hidhaan isaan eeggatu
Israa'el akka jettutti sababiin dallaa sana ijaaruu warreen Palastaayin karaa Weest Baank seenanii haleellaa gaggeessan ittisuuf jetti. Palastaayin ammoo akka jettutti tooftaa ittiin lafa qabachuuf yaaltudha .
Masijiidni waggaa 1,200 gammoojjii Israa'el keessatti argame